BountyHub - automated Bounty ပလက်ဖောင်း | Airdropics
► မူလစာမျက်နှာ » Автоматизированные Bounty платформы »
BountyHub - automated Bounty ပလက်ဖောင်း11 минут чтения
ယခုငါတို့မျိုးဆက်သစ်ခေါ်မယုံနိုင်စရာကောင်းသည့်ပလက်ဖောင်းအကြောင်းပြောဆိုကြမည် မင်္ဂလာပါ - ပုဂ္ဂလိကရုံးနှင့်အတူ Bounty automated ပလက်ဖောင်း, ၎င်း၏ရိုးရှင်းနှင့်ကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်အတူအံ့သြသွားတယ်. ဤပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်သင်တိုကင်များနှင့် cryptocurrencies ကိုအလွယ်တကူရနိုင်သည်။, ဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးဖြစ်စဉ်များအလိုအလျှောက်ပေါ်ပေါက်သောကြောင့်.
မင်္ဂလာပါ - အလိုအလျောက် bounty ပလက်ဖောင်း, အရာမုဆိုးတိုကင်ဆုချလိမ့်မည်, အချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အကူအညီအတွက် ICO သင်၏ကုမ္ပဏီကိုမြှင့်တင်ရန်စီမံကိန်းများ.
1. BountyHub platform ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ
3. Menu ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဤ link ကိုလိုက်နာပါ: https://airdropics.com/BountyHub
မှတ်ပုံတင်ခြင်းစတင်, အဆိုပါ BountyHub platform ပေါ်တွင်
3. Нажмите → “ငါစက်ရုပ်မဟုတ်ဘူး“.
4. →ကိုအသာပုတ်ပါ ခွင့်ပြုမိန့် Code ကိုရယူပါ.
BountyHub platform ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ
5. သင့်ရဲ့အီးမေးလ်ကိုသွားနှင့် code ကိုကူးယူ.
6. သေတ္တာထဲတွင် code ကို paste → အတည်ပြုသည့်ကုတ်.
7. စာနယ်ဇင်း→ လော့ဂ်အင်.
ပလက်ဖောင်း BountyHub အပေါ်ကုဒ်အားအတည်ပြု
သို့မဟုတ်သင်ရုံကို click နိုင်ပါတယ် CONFIRM ဤသို့မှတ်ပုံတင်အတည်ပြု.
BountyHub platform ပေါ်တွင် Confirm မှတ်ပုံတင်ရေး
သငျသညျကို log in တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်, သင့်ရဲ့ e-mail, အစဉ်မပြတ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ဖို့ passcode လာကြလိမ့်မည်.
ကျေးဇူးများစာရင်း - အားလုံးရရှိနိုင်ပါနှင့်ပိတ်ထားသောကျေးဇူးများစာရင်းကို.
2. ရပ်ရွာတာဝန်များ - ဤနေရာတွင်သင်သည်အသုံးပြုသူအလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး၎င်းအတွက်ဆုများရရှိနိုင်သည်, သင့်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများကိုဖန်တီးရန်.
ရပ်ရွာတာဝန်များ, အဆိုပါ BountyHub platform ပေါ်တွင်
3. ခေါင်းစဉ်များ အတွေ့အကြုံခေါင်းဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ် နှင့်မျှတမှု.
ခေါင်းစဉ်, အဆိုပါ BountyHub platform ပေါ်တွင်
4. ဈေး - ဤနေရာတွင်သင်တတ်နိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုငွေဖြင့်မှာယူနိုင်သည်, နှင့်, သင့်မှာကျွမ်းကျင်မှုရှိရင်, သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းကိုသင်တင်နိုင်သည်, အမှာစာရရန်.
ဝန်ဆောင်မှုစတိုး, အဆိုပါ BountyHub platform ပေါ်တွင်
ညာဘက်တွင် menu ၏ကြီးမားသောအပိုင်းကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။, ငါတို့သည်အမိန့်၌နေသောဆနျးစစျကွပါစို့.
မီနူး, အဆိုပါ BountyHub platform ပေါ်တွင်
အဆင့်ဆင့် Dashboard ကို - ဤသင့်အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်, သင်သည်သင်၏အဆင့်တိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်, ယင်းတိုကင်များအတွက်သင့်လျော်သောအထုပ်ကိုဝယ်ယူ BHT.
အဆင့်ဆင့်, အဆိုပါ BountyHub platform ပေါ်တွင်
2. ထို့နောက်သင့်ရဲ့ user name ကို, အကောင့်ဆက်တင်များ (အကောင့် & setting ကို), မန်နေဂျာနှင့် output ကိုအကြား bauntistom နှင့် switching.
အဆိုပါ user name နဲ့ BountyHub platform ပေါ်တွင်ယေဘုယျ settings ကို
3. ပရိုဖိုင်းကို - ဤသင်၏ပရိုဖိုင်ဖြစ်ပါသည်.
E-Mail က - သင့်က e-mail ကိုမှတ်ပုံတင်သည့်အခါ.
မင်းနာမည် - သင်တို့၏နာမ.
မင်းရဲ့တိုင်းပြည် - ကို select လုပ်ပါတိုင်းပြည်.
ဘာသာစကား - သင်၏ဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ပါ.
ကျား, မ - သင်ကကျား, မရှေးခယျြနိုငျ.
မှေးနေ့ - မွေးသက္ကရာဇ်ကိုထည့်ပါ.
စာနယ်ဇင်း→ သိမ်းဆည်းပါ, သိမ်းဆည်းရန်.
လူမှုကွန်ယက် - ပလက်ဖောင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လူမှုကွန်ယက်.
အိုင်ကွန်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ Facebook က.
ဤစာမူကို hashtag ဖြင့်ကူးယူပါ.
Facebook ကို BountyHub platform နှင့်စတင်ဆက်သွယ်ပါ
3. သွားပါ Facebook က ကူးယူထားသည့်စာမူကိုဤလယ်ကွက်၌ကပ်ထားပါ.
BountyHub ပလက်ဖောင်းမှ Facebook တွင် hashtag ပို့စ်ကိုထည့်ပါ
4. Нажмите опубликовать в вашу ленту новостей в Facebook က ၏ 24 часа и чтобы пост находился в топ5постов, နှင့်, чтобы был доступен для всех ваших друзей.
အိုင်ကွန်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ Instagram ကို.
Скопируйте пост с хештегом и отправьте его в вашу ленту новостей в Instagram ကို ၏ 24 часа и чтобы пост находился в топ5постов, နှင့်, чтобы был доступен для всех ваших друзей.
4. Введите ссылку на ваш профиль Instagram ကို и нажмите на стрелочку.
Скопируйте пост с хештегом и отправьте его в вашу ленту новостей в တွစ်တာ ၏ 24 часа и чтобы пост находился в топ5постов, နှင့်, чтобы был доступен для всех ваших друзей.
4. Введите ссылку на ваш аккаунт в တွစ်တာ и нажмите на стрелочку.
Скопируйте пост с хештегом и отправьте его в вашу ленту новостей в VK ၏ 24 часа и чтобы пост находился в топ5постов, နှင့်, чтобы был доступен для всех ваших друзей.
Скопируйте пост с хештегом и отправьте его в вашу ленту новостей в linkedin ၏ 24 часа и чтобы пост находился в топ5постов, နှင့်, чтобы был доступен для всех ваших друзей.
အိုင်ကွန်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ Google က.
စာနယ်ဇင်း→ Sign in with Google.
စာနယ်ဇင်း→ ADD WALLET.
5. စာနယ်ဇင်း→ သိမ်းဆည်းပါ.
Реферальная ссылка, အဆိုပါ BountyHub platform ပေါ်တွင်
Личные сообщения, အဆိုပါ BountyHub platform ပေါ်တွင်
Контакты, အဆိုပါ BountyHub platform ပေါ်တွင်
Заказы, အဆိုပါ BountyHub platform ပေါ်တွင်
Очки опыта, အဆိုပါ BountyHub platform ပေါ်တွင်
Покупка токенов BHT, အဆိုပါ BountyHub platform ပေါ်တွင်
База знаний, အဆိုပါ BountyHub platform ပေါ်တွင်
Список обновлений, အဆိုပါ BountyHub platform ပေါ်တွင်
သင်၏လူမှုကွန်ယက်များကိုချိန်ညှိချက်များတွင်ချိတ်ဆက်ရန်မမေ့ပါနှင့်, ဒါဆို system ကသင့်ရဲ့အလုပ်ကိုတွက်ချက်နိုင်ပြီ.
ဆက်တင်များတွင်ဖြစ်နိုင်သမျှ cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်ဖန်တီးနှင့်ထည့်ပါ, ဒီပိုက်ဆံအိတ်ကို, သငျသညျစီမံကိန်းတိုကင်များနှင့် cryptocurrencies အလိုအလျှောက်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်, အဆိုပါဆုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏ပြီးစီးပြီးနောက်.
စင်မြင့်ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ မင်္ဂလာပါ: https://airdropics.com/BountyHub
Ethereum ပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖန်တီးပါ → MyEtherWallet
BountyHunters - automated Bounty ပလက်ဖောင်း
Bounty0x - automated Bounty ပလက်ဖောင်း
လူစုလူဝေး 1 - ကွန်ယက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေရရှိမှု
Tags: Airdrop, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Blockchain, Ethereum, Tokens, Cryptocurrency, မင်္ဂလာပါ, Platform, Automatic
Previous PostBountyMiner - automated Bounty ပလက်ဖောင်း
Next PostBountyHunter - automated Bounty ပလက်ဖောင်း